Raha miala Rajao dia ahoana ny tohiny?
2018-05-06 @ 02:38 in Politika
Araka ny efa nosoratana teo aloha dia ny "Miala Rajao" no tarigetran'ny eny an-kianja amin'izao fotoana izao. Mpanara-baovao ihany ny tena fa toa tsy hita soritra ny fahavononana hifampiresaka na hifampiraharaha, ka raha misy ny olona te-hanao izany fifampiresahana na fifampiraharahana izany dia tondroina avy hatrany ho mpamadika ny tolona. Nosoratako ihany koa moa talohaloha tao fa hoe namoaka mpianatra ny mpitolona, efa mazavazava kokoa fa teny Nanisana teny hatrany no niaingan'ireo tanora manakorontana sekoly teto Antananarivo, heverina fa noho ny fahakamoana hianatra no tena antony, fa tsy dia nisy idiran'ilay tolona loatra fa ilay tolona fotsiny no natao fialana bala.
Mivantana moa ny teniko ary mbola voatazona indray ny anaran'ity bilaogy ity hoe "Hevitra Mpanohariana", satria efa manohitra kokoa ny zavatra atao eny an-kianja, mety holazaina ihany koa ho "mpamadika ny tolona", fa averiko ilay fomba fitenin-dRamakavelo, Jeneraly misotro ronono sady poeta, izay hoe "tsindrilentam-pahefana", maninona moa aho raha mba mametraka ny hevitro hosaintsainina fa tsy terena hanaraka am-bokony ny baikom-pitolomana? Koa aza tsiny raha mety hanafintohina ny mpamaky ny zavatra soratako fa izay aho, mamoaka ny hevitro dia samy mandini-tena avy eo.
Nandeha ny sahoan-dresaka fa "nifampiresaka mangingina teny Iavoloha Rajaonarimampianina sy Ravalomanana" ary efa in-droa mihitsy aza izany fihaonana izany. Raha ny fihaino ny kabarin'ny depioten'Antananarivo I avy amin'ny TIM dia mety ho marina ilay sahoan-dresaka, maro no tafintohina, indrindra fa amin'ny mpitolona, fa tsy izany kosa ny mpanoratra fa faly aza, satria efa misy izany ny fifampiresahana na natao mangingina aza, satria na ahoana na ahoana tsy maintsy hiafara amin'ny fifampiresahana ampahibemaso aza izany, raha tiana hilamina ny firenena, fa sanatriavina kosa ve dia ady mitam-piadiana no tadiavina?... Avy amin'ny fandrenesana ny kabary eny an-kianja no azo iheverana fa te-ho mpitari-tolona, andry manokana tsy te-hiankina amin'ny mpitarika azy ny depiote TIM eny, tsy mahasahy milaza mahitsy ny lalan-kizorana sy ny tanjona farany satria tsy tanjona ny fanalana an-drajao fa dingana fotsiny ihany, fa maniry aho mba ho diso ny fijeriko amin'izay fiheverana izay.
Ka fanontaniana ary no apetrako hoe: Raha miala Rajao dia ahoana ny tohiny? Iza no handray ny toerany? Ahoana ny mety ho fiantraikan'izany eo amin'ny fiainam-pirenena, eo amin'ny toe-karena? Sa hiandry ny tafika handray fahefana? Manahy aho fa lasa mandeha an-jambany fotsiny ilay tolona fa mbola mitsapatsapa amin'izay lalan-kalehany, raha tsy hoe efa voapetraky ny hafa tsara ny tetipanorony fa ny sasany kosa zary kofehy manara-panjaitra satria efa natomboka ihany izy ity?
Lasa miverina kely amin'ny tantaran'ny 2009 aho. Raha ny fomba famaky ny tantara tamin'izany fotoana izany dia nanao izay tsy hifanatrehana hifampidinika Ravalomanana, fony mbola teo amin'ny fitondrana. Aty aoriana isika vao nahita fa ny lehiben'ny delegasiona notondroiny ho eny kay efa miara-dia miafina amin'ny mpitolona (ka nandrisika an-dRavalomanana hoe aza tonga aty ianao fa tahaka ny hafahafa aty amin'ny Le Hintsy Ambohimanambola aty), ary ry zareo mpitolona kosa saiky hanao rodobe tsy hanaja ny fetr'isan'izay tokony handray anjara fifampidinihana. Nandeha daholo ny karazam-pitapitaka mialoha na mandritra ny fifampidinihana hanaratsiana ny andaniny na ny ankilany. Amin'izao fotoana izao, izay mihevi-tena ho manana ny hery sy ny vahana tsy manaiky hifampidinika nefa izay no lesoka voalohany ao aminy, sa mahatsiaro kosa izay natao tamin'ny taona 2009?
Manaraka izany indray dia karazany mampihomehy ihany koa ilay hoe alaina any amin'ny toeram-piasany any amin'ny minisitera ny mpiasam-panjakana, noho ny ramatahora. Olondehibe ireo mpiasa ireo ka tsy tokony ho alaina izany fa ry zareo no mamaha ny olany amin'ny fahaizana miara-mientana fa matoa ry zareo tsy mandeha dia tsy manana ilay faharisihana handeha mihitsy, fiheverako samirery izany. Tamin'ny taona 1991, nikatso tanteraka ny asam-panjakana teto Antananarivo, tsy nisy mpiasa intsony na nisy fa tena vitsy ny mpiasa nijanona tamin'ny minisitera, fanaterana minisitra no natao tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny taona 2009, fanaterana minisitra an-dalambe no natao tamin'izany, tsy voatery ho betsaka na vitsy ny olona isaky ny minisitera, fa tsy nitovy velively tamin'ny taona 1991 kosa ny fikatsoan'ny asam-panjakana. Taona 2018, fitetezana minisitera tsy manatitra minisitra fa maka mpiasa, nefa hoy aho hoe raha alaina ilay mpiasa dia tokony ho isan'andro no maka azy fa tsy indray mandeha iny ihany. Mivadika tanteraka ny fomba fitolona ary tsy tokony hitovy velively rahateo.
Koa raha fehezina ny resaka dia izao: marina fa efa nataonareo ny tolona ary efa malalaka ianareo amin'izay atao eny an-kianja saingy mba miangavy ihany ny hanokafam-baravarana isian'ny vahaolana tsy miantraika ratsy loatra amin'ny toe-karena. Sa hifanendry ho minisitra indray ianareo nefa efa nambaran'ny tafika sy ny polisy fa tsy hanaiky toe-javatra tahaka izany velively ry zareo? Torohevitro: ianareo no manondro ny andro sy ny toerana ihaonana sy ny lohahevitra ifampidinihana dia anjaran'ny hafa ny mieritreritra raha te-hanavo-tena amin'ny alalan'ny fanetre-tena ry zareo na mbola ho diso eritreritra ao anatin'ny avonavona ihany. Fitadiavam-bahaolana haingana io fa lasa tolona lavitr'ezaka be izany fitadiavana hanaisotra ny filoha tsy mandalo fombafomba avy amin'ny HCC izany, ary ny HCC rahateo toa tsy teren'ny lalàna hamoaka ny didiny ao anatin'ny fotoana voafetra... Azonareo atao ny mitondra ny kibay (miala Rajao) fa tokony hisy kosa ny karaoty (dinika an-kitsimpo) avy aminareo dia hita ho mahay mitondra ianareo fa tsy ny mpitolona no avezivezy etsy sy eroa ho reraka ambony ihany.
Dia izao ihany koa, tsy nety mihitsy ny isan'ny depiote nofidiana tamin'ny taona 2013 iny satria nokendrena hahavitsy ny solontenan'ny faritanin'Antananarivo taloha nefa natao hahabe isa ny tany amin'ny faritany... Na raha tsorina dia hoe nokendren'ny MAPAR iny hahabe isa an-dry zareo ary dia betsaka tokoa ry zareo nivoaka avy tao, fa izao kosa lanjalanjao izay tena tokony ho isan'ny depiote hifanaraka kokoa amin'ny isan'ny mponina amin'ny fari-pifidianana misy azy avy. Hevitra tsy maintsy atsipy ireo...